ရောင်းဝယ်ရန် သင်ယူလေ့လာခြင်း: လူသစ်များအတွက် လမ်းညွှန်
FBSမှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး၊ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိဖြစ်နေပါသလား? ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေသင်ယူရမလဲလို့ စူးစမ်းနေပါသလား? အချိန်တိုအတွင်းမှာ Forex ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာစေမည့် အကြံပြုချက်များကို ကျွန်တေ်ာတို့ စုစည်းပေးထားပါပြီ!
Forex ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ငွေကြေးအတွဲများကို ဝယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်းအပြောင်းအလဲကြားမှာ အမြတ်ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများ အများကြီးပါဝင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အရ အရောင်းအဝယ်ဆိုသည်မှာ Metatraderလို့ခေါ်တဲ့ အရောင်းအဝယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် အော်ဒါများ ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အော်ဒါဆိုသည်မှာ ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကို ဝယ်ရန်(သို့) ရောင်းရန် ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ၊ ပြုပြင်မွမ်းမံမလဲ နှင့် MTမှာ အော်ဒါတွေဘယ်လိုပိတ်မလဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ ဇယားများကို စိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစတဲ့ အခြေခံဗဟုသုတတွေ သိထားသင့်ပါသည်။ ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကို ကျွန်တော်တို့ စီးရီး Metatraderအကြောင်း ဗီဒီယိုများမှာ ရှာဖွေရယူနိုင်ပါသည်။
အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန် ဘာလုပ်ရမလဲသိထားဖို့လိုပါသည်။ သုံးသပ်ချက်များသည် မည်သည့်ငွေကြေးကို ရောင်းဝယ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါသည်။ ဒါ့အပြင် ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ရှာဖွေခွင့်လည်းရစေပါသည်။
အဓိက သုံးသပ်ချက် ၂မျိုးရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဇယားကိုသုံးသပ်ခြင်း - ဈေးလမ်းကြောင်းဦးတည်ရာခွဲခြားခြင်း၊ ဈေးပြန်ဆုတ်မည့် (သို့) အရှိန်မြင့်မည့် အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တွေကို ရှာဖွေခြင်းစတာတွေကို သင်ယူလေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် Forex ဈေးကွက်ကို စီးပွားရေးအဖြစ်အပျက်များက ဘယ်လောက်တောင် လွှမ်းမိုးမှုရှိသလဲဆိုတာ နားလည်ထားသင့်ပါသည်။ စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် - ကမ္ဘာ့အဓိက နိုင်ငံကြီးများ၏ စီးပွားရေးထုတ်ပြန်ချက်များကို လေ့လာရန်လိုပါသည်။ ဤအကူအညီဖြင့် အကျိုးဖြစ်စေမည့် သတင်းတွေမှာလည်း ရောင်းဝယ်နိုင်သလို သင့်အရောင်းအဝယ်ကို ထိခိုက်စေမည့် မလိုလားအပ်သည့် ဖြစ်ရပ်များကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
[ဈေးကွက် သုံးသပ်ချက်အကြောင်း စာသင်ခန်းစာမှ အကြံဥာဏ်ရယူပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိ [နေ့စဉ် ဈေးကွက်စိစစ်ချက်နှင့် အရောင်းအဝယ် အကြံဥာဏ်များကို လိုက်နာပါ။
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် မကောင်းတဲ့ရလဒ်များကို ဆန့်ကျင်ရန် သင့်အားသေချာစေပြီး၊ ဈေးကွက်မှာ ကြာကြာနေနိုင်မည့် ငွေကြေးကိုစုစည်းပြီး ရောင်းဝယ်ရန် အခွင့်အရေးအမြောက်အများရှိအောင် ကူညီပေးပါသည်။ ဒါဟာ သင့်အရောင်းအဝယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အရှုံးတွေကို ကန့်သတ်ပြီး၊ အနိုင်ရချေကို ပိုများအောင် ကူညီပေးမည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏ အဓိကစည်းမျဉ်းများကို သိအောင်လုပ်ပါ။
သင့်ပထမအရောင်းအဝယ်ကို စလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဖိစီးမှုများပြီး အောင်မြင်တဲ့အရောင်းအဝယ်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မည်။ ထင်တာထက် ပိုရှုပ်ထွေးနိုင်ပေမည့် မစိုးရိမ်ပါနဲ့: အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ရောင်းဝယ်သူများဆီမှ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို ဤ [ဆောင်းပါးတွင် စုစည်းပေးထားပါသည်။
FBSမှ သင့်လေ့လာသင်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ပိုမို မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီး ပျော်စရာကောင်းအောင် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အမြောက်အများ ပေးထားပါသည်။
ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများ ကြည့်ရှုပြီးနောက် Forex လမ်းညွှန်စာအုပ်မှ စာသင်ခန်းစာများမှတဆင့် နားလည်မှုပိုမိုလေးနက်အောင် လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပိုမိုလေ့လာရန်အတွက် Kathy Lien၏ "Daily Trading & Swing Trading the Currency Market" နှင့် Alexander Elder၏ "Trading foraLiving: Psychology, Trading Tactics, Money Management" တို့၏ စာအုပ်များကို လေ့လာပါလို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
FBSမှလည်း Forex စတင်မည့်သူများနှင့် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူများအတွက်ပါ တိုက်ရိုက်ပညာပေးအစီအစဉ်များနှင့်၊ သုံးသပ်လေ့လာတဲ့ အင်တာနက်မှသင်ကြာဆွေးနွေးခြင်းများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာများတွင် သင်သိလိုသမျှကို ကျွမ်းကျင်သုံးသပ်သူများနှင့် အရောင်းအဝယ်ပညာရှင်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဘယ်လိုသင်ကြားရေးတွေ လာဖို့ရှိလဲဆိုတာကြည့်ရှုရန် အင်တာနက်မှသင်ကြားဆွေးနွေးခြင်း အချိန်ဇယားကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
အရောင်းအဝယ် ကံကောင်းပြီး၊ အကျိုးအမြတ်များများရပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်!
လူသစ်များ forex ပညာပေးသင်ကြားရေး